गास जुटाउन गएका लाश बनेर फर्किए | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / गास जुटाउन गएका लाश बनेर फर्किए
गास जुटाउन गएका लाश बनेर फर्किए
Posted by: युगबोध in प्रमुख समाचार, स्लाइड July 8, 2018	0 256 Views
दाङ र रोल्पामा १२ जनाको शव झारियो
दे उखुरी  । राजपुर गाउपालिका वडा नं. १ गुरुङखो ला निवासी जमानसिंह गिरी, कमल र बालकुमारका मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो  । बे रो जगारी समस् याले सताएपछि बालकुमार घर्ती र कमल बुढा रो जगारीका लागि बाटो खन्ने काममा मुस् ताङ जानु भयो  । साझ बिहानको गास जुटाउन गएका उनीहरु दुबै लाश बने र फर्किए । ‘आफ्नै ठाउ मा रो जगारी पाएको भए किन जानुपथ्र्याे अन्त’– जमानसिंहले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो – ‘अहिले बे रो जगारी समस्याले लाश बने र फर्किनुप¥यो  । गाउ शो कमा डुबे को छ । शव बुझ्न लमही आएका हौ ं ।’
मुस् ताङमा भएको टिप्पर दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरुको शव हे लिको प्टरमार्फत ल्याइएको छ । दाङको लमहीमा कपिलवस् तु निवासी ३५ वर्षीय कमानसिंह रो कासहित दाङ राजपुर गाउ“पालिका वडा नं. १ गुरुङखो ला निवासी २५ वर्षीय कमल बुढा, सो ही ठाउ“ निवासी ३० वर्षीय बालकुमार घर्ती, राप्ती गाउ“पालिका वडा नं. ३ निवासी ३१ वर्षीया कविता घर्ती मगर, सो ही ठाउ“ निवासी ३५ वर्षीय सुवे र चौ धरी, सो ही ठाउ“ माइत भएकी २२ वर्षीया विन्ति घर्तीको शव हे लिको प्टरमार्फत लमहीमा झारिएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले जनाएको छ ।
यस् तै दाङ राप्ती गाउ“पालिका वडा नं. ९ निवासी हाल कास् की जिल्लामा बस् दै आएका श्रीमान श्रीमती ५० वर्षीय गुरुदत्त थापा र ४३ वर्षीया शान्ति थापाको शव आफन्तले कास् कीमै बुझे को राप्ती गाउ“पालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवे दीले बताउनु भयो  ।
यस् तै रो ल्पा थवाङ गाउ“पालिका वडा नं. १ निवासी २८ वर्षीय सुकमान रो का, सो ही गाउ“पालिका वडा नं. ५ निवासी १९ वर्षीय महे श रो का, सुनछहरी गाउ“पालिका वडा नं. १ निवासी ३२ वर्षीय रामकुमार पुन, सो ही ठाउ“ निवासी ३२ वर्षकै सो न्तु घर्ती, थवाङ गाउ“पालिका वडा नं. ५ निवासी सिर्जना मगर, सो ही ठाउ“ निवासी २३ वर्षीय राष्ट्रे रो काको शव हे लिको प्टरमार्फत रो ल्पामा झारिएको हो  । मृतकका शव पो ष्टमार्टमपश्चात आफन्तको जिम्मा लगाइने छ । उनीहरुको पो ष्टमार्टमपछि आइतवार फुलिवन लगे र आफन्तलाई जिम्मा लगाइने छ । त्यस् तै रो ल्पा थवाङ ५ की जीतकुमारी पुन, सो ही वडाका जितमायाँ घर्ती र थवाङ १ का मौ सम घर्तीको शव पनि पो खरामा नै राखिएको छ ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजे न्द्रबहादुर श्रे ष्ठसहित सुरक्षा अधिकारी, स् थानीय सरकारका प्रमुखहरु लमही अस्पताल पुगे का थिए । बसाइ सरेका समेत दाङ र रो ल्पाका गरी १७ जनाको ज्यान गएको छ । बा“की ओ खलढुंगाका जीवन माझी, चालक धादिङका सुजन घलान र स् याङ्जाका कृष्ण क्षे त्रीको ज्यान गएको छ ।
कमाउने व्यक्ति गुमाउदाको पीडा
टिनले छाएको घर । आफन्तहरु जम्मा भएर सान्त्वना दिने प्रयत्न गरिरहे का छन् । खाटमा पल्टिएकी छन् १३ वर्षीया सिर्जना घर्ती । उहा“का आ“खा ओ भाएका छै नन् । छिन–छिनमा भक्कानिएर रुनुहुन्छ । शुक्रवार मुस् ताङमा भएको टिप्पर दुर्घटनामा सिर्जनाले आमा कविता घर्तीलाई गुमाउन पुग्नु भयो  ।
आमा र बुवा सगै मजदुरी गर्न मुस् ताङ जानु भएको थियो  । वै शाख महिनामा काम गर्न भन्दै मुस् ताङ जानुभएको हो  । आमाको मुख दे ख्न नपाई सिर्जनाले मातृत्व गुमाउनुप¥यो  । वीरबहादुर शुक्रवार विरामी भएकाले साइडमा जानु भएन । त्यही भएर उहा“ भने सकुशल हुनुहुन्छ ।
श्रीमान सुवे र चौ धरीको मृत्युको खबरले मुर्छा परे र मुढो ढले झै ढल्नुभएको छ दे वन्ती चौ धरी । खरले छाएको घरमा टिनको छानो लगाउन कमाउन जानुभएको थियो सुवे र मुस् ताङ । घरमा ८० वर्षीया हजुर आमा धनवासी चौ धरी नाति सुवे रलाई कुरे र बस् नुभएको थियो  । तर नातिको अनुहार सम्म दे ख्न पाउनुभएन उहा“ले  । गहभरी आसु झादैर् उहाले भन्नुभयो – ‘आफ्नो घर बनायो अनि कमाउन जान्छु भने र गयो तर नफर्किने गरी गयो ’– उहाले भन्नुभयो – ‘घरमा अब कमाउने मान्छे छै न, अब कस् को सहारामा बा“च्ने ?’ सुवे रका दुई छो री र एक छो रा छन् । विन्ति रो का मगर सुकमानकी बहिनी हुनुहुन्छ । विन्तिको पनि टिप्पर दुर्घटनामा मृत्यु भयो  । बहिनीको लाश कुरे र बस् नुभएको छ सुकमान । ‘टिकापुर विवाह भएको हो  । तर बहिनीको लाश यतै बुझ्छौ ं’– उहाले भन्नुभयो – ‘पै सा कमाउन जान्छु भने र काम गर्न गएकी हुन् । उनको मृत्युको खबर सुने र विछिप्त छौ ं ।’
राप्ती गाउ“पालिका वडा नं. ३ एउटै टो लका तीनजनाको टिप्पर दुर्घटनामा परे र मृत्यु भएपछि सिंगो गाउ शो कमा डुबे को छ । सुवे र, विन्ति र कविताको घर एकै टो लमा छ । नया वस्तीका विन्ति र कविताको घर पर्छ भने , ६५ नम्वर टो लमा सुवे रको घर । यहा“का महिला तथा पुरुषको मुख्य पे शा भने कै मजदुरी गर्ने हो  । ‘धे रै जसो बाटो बनाउने , घर बनाउने काममा मजदुरी गर्न अन्यत्र जान्छन्  । के ही विदे शमा छन्’– स् थानीय दलबहादुर घर्ती मगरले भन्नुभयो – ‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहे को स्थानमा हाम्रो बसो बास थियो  । पछि त्यहा प्राविधिक शिक्षालय बस्ने भएपछि हामीलाई यता जंगलमा सारियो  । तर, अहिले सम्म पुर्जा छै न । मजदुरी नगरी साझ बिहान खान पुग्दै न ।’ दै निक खाना खाएर ६ सय रुपै या“ ज्याला दिने भन्दै मजदुरहरुलाई यहाबाट मुस्ताङ लगिएको थियो  । नया वस्तीकै १९ वर्षीय श्याम बुढा घाइते हुनुभएको छ । श्यामको घाटीदे खि मुन्तिरको भाग नचले को उहा“की भाउजू शान्ति बुढाले बताउनुभयो  ।
धनपुरीको काख रित्तियो
रो ल्पा थवाङ गाउपालिका–५ उवा रो ल्पाकी धनपुरी रो काको काख रित्तिएको छ । दुई श्रीमानबाट गरी चार सन्तानकी आमा रहे की रो काले एकै पटक चारै जना सन्तान गुमाउनुभएको छ ।
पहिले का श्रीमान्बाट जन्मे का कमानसिंह रो का र कर्मजिता (कविता) घर्ती तथा दो स्रो श्रीमानबाट जन्मे का राष्ट्रे रो का र महे श रो काको मुस् ताङमा भएको टिप्परमा दुर्घटनामा परे र निधन भएपछि उहा“ले सम्पूर्ण सन्तान गुमाउनुपरे को हो  ।
पहिले का श्रीमान्को निधन भएपछि रो काले गाउकै हितबहादुर रो कासग विवाह गर्नुभएको थियो  । यो स“गै हित रो का पनि सन्तानविहीन भएका छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका कमानसिंहकी श्रीमती र कविताका श्रीमान पनि घाइते भएका छन् । कमानसिंह रो ल्पाबाट बसाइ सरे र कपिलवस् तुमा बस् दै आएका थिए भने कविताको दाङमा विवाह भएको थियो  ।
रो ल्पाको थवाङ–५ उवा बस् ने र त्यहाँ जन्मे र अन्यत्र गएकासहित ६ जनाको ज्यान गएपछि पूरै गाउँमा रुवाबासी चले को वडाध्यक्ष गो बद्र्धन घर्ती मगरले जानकारी दिनुभयो  । एउटै घरपरिवारसँग जो डिएका पाचजनासम्मको निधन भएपछि वडा पूरै शो कमा डुबे को उहा“ले बताउनुभयो  । यस क्षे त्रका बासिन्दा वर्षायाममा कमाइ गनेर् र दशै ं तिहारमा फर्कने गरी बाहिर जाने गरे को उहा“ले बताउनुभयो  ।
Previous: नेकपामा नियमावली टुंग्याउन कार्यदल
Next: न्यायिक समितिमा दुई सय ४६ मुद्दा, एक सय दुई मिलापत्र